Isebenza njani ICloud?
Izixhobo zanamhlanje ze-Apple iOS zinokubonisa okanye zidlale imithombo yeendaba efanayo: iifoto, umculo, iincwadi, iinkqubo zeTV, njalo njalo. Heck, ezinye izixhobo ze-iOS (njenge-iPhone yakho kunye ne-iPod touch) zinokwabelana ngezicelo ozifakayo. Ke ngoko, iyavakala into yokuba ungazami ukwabelana ngayo yonke imithombo yeendaba zakho zedijithali kuzo zonke ezi zixhobo, kwaye yile nto i-iCloud imalunga nayo. UApple ubiza olu ngqamaniso lokutyhala.
Nanku ukujonga indlela esebenza ngayo inkqubo yokutyhala. Khawufane ucinge ukuba ugqibezele uxwebhu lwamaphepha kwi-iMac yakho (isimemo sosuku lokuzalwa lonyana wakho), kodwa useofisini, kwaye kufuneka ufumane uxwebhu kusapho lwakho ukuze bakwazi ukuluhlela nokuluprinta besebenzisa unyana wakho I-iPad.
Ngaphambi kwe-iCloud, kwafuneka uncamathisele uxwebhu kumyalezo we-imeyile okanye ulilayishe kuhlobo oluthile lokugcina kwi-intanethi (njengeDropbox okanye iMicrosoft SkyDrive), kwaye ke ilungu losapho kuye kwafuneka likhuphele kwaye ligcine uxwebhu kwi-iPad ngaphambi kokusebenza nayo. Nge-iCloud, ugcina nje uxwebhu kwi-iMac yakho kwilayibrari yakho ye-iCloud, kwaye i-OS X ityhala ngokuzenzekelayo uxwebhu kwi-iPad! Uxwebhu lwakho luvela kwi-iPad, ekulungele ukuvulwa, ukuhlelwa kunye nokuprintwa- kwaye iyavela nakwezinye izixhobo ezisebenzisa i-iOS 5 okanye kamva (zisebenzisa i-ID efanayo ye-Apple) ngokunjalo. Eli nani lilandelayo likunika umbono wento eyenzekayo ngasemva xa esinye sezixhobo zakho sityhala idatha sisebenzisa iCloud.
ICloud isebenza ngokutyhala idatha kuzo zonke izixhobo zakho ze-iOS.
Kwaye iCloud ayikhawulelwanga kumajelo edijithali kuphela. I-iMac yakho inokuzivumelanisa ngokuzenzekelayo iiakhawunti zakho ze-imeyile, iikhalenda zekhalenda kunye neziganeko, kunye nongeniso lwabafowunelwa kunye nezinye izixhobo ze-iOS 5 okanye kamva kwi-Intanethi, ke ukuhlala unxibelelana kulula kakhulu nokuba uphi, okanye isixhobo esenzeka kuso Sebenzisa ngalo mzuzu.
I-Apple iphinda iphose kwi-5GB yokugcina simahla kwi-intanethi onokuyisebenzisa kuzo zonke iintlobo zezinto: kungekuphela kweefayile zemithombo yeendaba zedijithali kodwa namaxwebhu ongathanda ukuwagcina kwi-Intanethi ukuze agcinwe ngokukhuselekileyo. Izinto ozithenga ngeVenkile yeTunes- umculo, ividiyo, kunye nokusetyenziswa- kunye nemifanekiso ekuMsasazo wakho weSithombe ayibaleli kumda wakho wasimahla we5GB. (Okungakumbi kwindlela ongawandisa ngayo umda we-5GB kamva kwisahluko.)
Ukujoyina uguquko lwe-iCloud, kufuneka kuqala ube ne-ID ye-Apple. Ukuba awuzange wenze enye ngexesha lokuseta kwasekuqaleni kweMavericks, unokwenza i-ID ye-Apple kwiVenkile ye App.
Unokufikelela kumaxwebhu akho kwiwebhu kwi icloud.com . Ngena nge-ID yakho ye-Apple kunye negama lokugqitha ukuze uthumele imeyile, fikelela abafowunelwa kunye nekhalenda, hlela amanqaku akho kunye nezikhumbuzo, khangela izixhobo zakho, kwaye usebenzise iinguqulelo ezikwi-Intanethi zamaphepha, iinombolo kunye ne-Keynote. (Ungalibali ukuba uyakwazi ukufikelela kwezo web-based, ii-intanethi ezisebenza nge-Intanethi nangaliphi na ixesha, nokuba usebenzisa iPC!)
Amabala amnyama esikhumba ebusweni
isetyenziselwa ntoni ipaxil
Ngaba i-nph insulin incopho yayo
amagama asezantsi eeseli zeheparin
iziphumo ebezingalindelekanga zepakethe yedrithi